Ungazenza njani iifowuni zevidiyo kuWhatsApp | Iindaba zeGajethi
I-WhatsApp yenye yezicelo ezimbalwa ezenziwa kwangoko zemiyalezo, kude kube izolo khange zinike ithuba lokwenza iifowuni zevidiyo. Kuyinyani ukuba kwiintsuku ezimbalwa ngoku, abasebenzisi bohlobo lwe-beta lwesicelo esidumileyo banokwenza lo msebenzi, kodwa ngoku iyafumaneka kubo bonke abasebenzisi besicelo, nokuba yeyiphi na indlela yokusebenza yefowuni abayisebenzisayo kwaye sele iyafumaneka nkqu Windows 10 Iselfowuni, uguqulelo lweWhatsApp oluhlala lungamanyathelo amabini okanye amathathu emva kwalawo e-Android okanye i-iOS.
Ngale nqaku siza kukuchaza ngendlela elula negqibeleleyo indlela yokwenza iifowuni zevidiyo kwi-WhatsApp Kwaye ufumane okuninzi kulo msebenzi mtsha obeka owona myalezo usetyenziswayo okhawulezileyo kwihlabathi namhlanje eminwe yethu.
Ngaphambi kokuchaza indlela yokwenza umnxeba wevidiyo kuWhatsApp, kufuneka siqale ngokukuxelela into ekufuneka uyenzile ukufikelela kuzo, kwaye oko kukuthi awuyi kubafumana ngokungagqibekanga kwaye ngaphandle kokwenza nantoni na kuhlobo lwangoku lweWhatsApp, ngaphandle kokuba sele uyihlaziyile okanye yenziwe ngokungazi.
1 Hlaziya i-WhatsApp ukuze ube nakho ukwenza iifowuni zevidiyo
2 Uyenza njani umnxeba wevidiyo inyathelo ngenyathelo
3 Lumka, ukusetyenziswa kwedatha kuphezulu kakhulu kwaye umgangatho usezantsi kakhulu
Hlaziya i-WhatsApp ukuze ube nakho ukwenza iifowuni zevidiyo
Iifowuni ze-WhatsApp zevidiyo, njengoko besesitshilo, besele zikhona kuhlobo lwamva nje lwenkonzo eyaziwayo, kodwa ukuze sizenze kwaye siqale ukuzisebenzisa kufuneka hlaziya usetyenziso kunye nohlobo olutsha olukhutshwe izolo. Oku sele kufumaneka kuGoogle Play kunye neVenkile yeApple, onokufikelela kuyo ngezi linki zilandelayo.
Nje ukuba uhlaziye usetyenziso, ngalo lonke ixesha ungena kwincoko nomhlobo, umntu omaziyo okanye ilungu losapho, Kuya kufuneka ukwazi ukubona kwikona ephezulu ngasekunene i icon enjengaleyo unokuyibona kumfanekiso olandelayo;
Kwimeko apho singayiboni i-icon emfanekisweni, mhlawumbi asinayo i-WhatsApp ehlaziyiweyo kuhlobo lwamva nje, into ekufuneka uyenzile ngendlela ebalulekileyo ukuqala ukusebenzisa iifowuni zevidiyo. Uhlaziyo sele lukhutshiwe kwihlabathi liphela ngoko ke ukhetho obungazukulufumana alugunyaziswanga ngokupheleleyo.
Ukuba emva kokuba i-WhatsApp ihlaziyiwe kwaye usazi ukuba unenguqulelo yamva nje yesicelo efakiweyo, kunokuthi gwenxa. Ingcebiso yethu kukuba uyisuse usetyenziso kwifowuni yakho kwaye uyikhuphele kwaye uyifake kwakhona ukuze ifakwe ngokucocekileyo. Ngale nto, i-icon kufuneka ivele ivele kuwe kwaye nayo ibe nethuba lokwenza iifowuni zevidiyo zifumaneke.
Uyenza njani umnxeba wevidiyo inyathelo ngenyathelo
Ukwenza umnxeba wevidiyo kuWhatsApp kufuneka ucofe i-icon esele siyibonile okanye ufake iinkcukacha zonxibelelwano ukusuka apho ngaphambi kokuba sithumele umyalezo okanye senze umnxeba, ngokusebenzisa isicelo ngokwaso. Ngoku i icon iya kwenza umnxeba wevidiyo nayo iyavela.
Nje ukuba siqale umnxeba wevidiyo siza kubona into efanayo nale ndikubonisa yona apha ngezantsi. Ngezizathu zokuba niqonde nonke, ndiyigubungele inombolo yefowuni yomfowunelwa owenza umnxeba wevidiyo.
Kwakamsinya nje ukuba umnxeba esiye simfowunele uphume, kuya kuthatha imizuzwana embalwa ukuba umfanekiso womntu esiye simtsalele umnxeba uqale ukubonisa. Kwimizuzu yokuqala kwaye kuxhomekeke kunxibelelwano esinalo kwinethiwekhi yenethiwekhi ifoto yomfowunelwa ngokungagqibekanga okanye ngokuthe ngqo umfanekiso wayo iya kuboniswa.
Umfanekiso wethu uza kuvela kwikona ephezulu ngasekunene, njengoko ndikubonisa lo mfanekiso ulandelayo. Ukuba ukhe wazama olu hlobo lwenkonzo kwezinye iinkqubo, isebenza ngokufanayo ngokubonisa umfanekiso wakho kwibhokisi encinci kunye nomfanekiso womnye umntu kwiscreen sonke.
Phakathi kwezinto onokukhetha kuzo ikwakhona ukubamba nayiphi na ifowuni;
Ukusebenza kweefowuni zevidiyo zikaWhatsApp kulula kakhulu kwaye awuzukufuna ixesha elininzi ukufunda indlela yokuphatha lo msebenzi mtsha, nangona ewe, nje ukuba ubazame uyakuqonda ukuba abaphuhlisi besicelo basenezinto ezininzi zokuphucula Uninzi lwemiyalezo esetyenziswayo kwangoko ehlabathini ukuze wonke umntu aneliseke okanye ubuncinci afane noko akuthembisayo ngemifanekiso yawo yokwazisa ngezi ntlobo zeminxeba.
Lumka, ukusetyenziswa kwedatha kuphezulu kakhulu kwaye umgangatho usezantsi kakhulu
Izolo ngelixa bendivavanya iifowuni zevidiyo, ukuza kuthi ga ngoku ukuze ndikwazi ukwenza eli nqaku ulifundayo ngoku, enye yezona zinto zindithathele ingqalelo umgangatho weefowuni zevidiyo ezenziweyo ezenziwa ngeWhatsApp. Uvavanyo lwenziwe ekhayeni lam, bobabini abantu banxibelelene nenethiwekhi ye-WiFi, umgangatho ungalunganga kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android.
Ndicinga ukuba ukuba siqhagamshelwe kwinethiwekhi yothungelwano ngomzekelo i-3G okanye i-4G iya kuba sezantsi kakhulu, into ekunzima kakhulu ukuyiqonda, xa ukongeza ukusetyenziswa kwedatha kuphezulu kakhulu.
Kwaye iifowuni zevidiyo esizenzayo ngeWhatsApp zisebenzisa ukuya kuthi ga kahlanu kunezinye izicelo ezivumela oku kusebenza, umzekelo iFaceTime. Ngendlela elula sikwazile ukuqinisekisa ukuba in umnxeba oqhelekileyo asikaze sisebenzise enye into kwaye akukho nto ingaphantsi kwe-33MB ngomzuzu, engadibaniyo xa sinxibelelana nenethiwekhi yeWiFi, kodwa eyenzeka kakhulu ukuba sisebenzisa uqhagamshelo lwethu lwedatha.
Okwangoku, iifowuni ze-WhatsApp zevidiyo zikwisigaba sophuhliso, kungoko kunokwenzeka ukuba ekuhambeni kwexesha abazukuphucula kuphela umgangatho wabo, kodwa banciphise nokusetyenziswa kwedatha.
Ngaba sele uzame iifowuni ze-WhatsApp ezifumanekayo ukususela izolo?. Sitshele ngamava akho usebenzisa indawo ebekelwe izimvo kule posi okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ukwenza iifowuni zevidiyo kwi-WhatsApp
Entsha i-OnePlus 3T sele iyinyani enexabiso kwi-439 euro